Hopes dashed for Diaspora vote as court case deferred indefinitely – Nehanda Radio
Hopes dashed for Diaspora vote as court case deferred indefinitely
On Jun 14, 2013 67
On Thursday the case in which an exiled Zimbabwean is fighting for his right to vote was postponed indefinitely by the newly-formed Constitutional Court.
Chief Justice Godfrey Chidyausiku officially opens the 2013 legal year at the High Court in Harare
Tawengwa Bukaibenyu filed an application at the Supreme Court (now the Constitutional Court) last year, challenging the barring of postal ballots for exiled Zimbabweans, which he said violated his right to choose his country’s government.
The decision by the Constitutional Court to delay hearing the matter will disappoint millions of exiled Zimbabweans, whose hopes were pinned on the case.
Zimbabwe Con-Court reserves ruling in Diaspora vote ban…
Mar 15, 2018 15,026
Jan 20, 2018 14,675
Jul 7, 2017 17,781
Oct 14, 2016 195
With President Robert Mugabe unilaterally proclaiming the poll for July 31st it is highly unlikely that the Constitutional Court, which is swamped with election-related cases, will hear the matter in time for exiled Zimbabweans to vote, even if Bukaibenyu were to win the case.
Bukaibenyu’s argument is that denying him his right to vote is unfair, as economic hardships forced him to go to South Africa, but he intends to return to Zimbabwe, his “permanent home” once the situation normalises and he can obtain employment in the country.
He wants electoral laws that prohibit the Diaspora vote declared unconstitutional, saying: “I therefore have a vested interest to do my part to ensure that the situation in Zimbabwe normalises as soon as possible, and this includes participation in elections and civic duties in Zimbabwe.”
ZANU PF has always insisted that Zimbabweans living abroad will not be allowed to vote as payback for sanctions imposed by western governments on the party’s corrupt leadership.
In February, after a case brought by Gabriel Shumba, the African Commission on Human and People’s Rights ordered the government to make provisions allowing Zimbabweans abroad to use the postal voting system during the March referendum, but the ruling was ignored by the government. SW Radio Africa
Ncube, Moyo out of Bosso, Rhinos match
Darlington NyambiyaDiaspora Vote
Zimbabwe Con-Court reserves ruling in Diaspora vote ban challenge
Diaspora Votezimbabwe diaspora vote
Diaspora VoteRita Makarau
Diaspora Votehuman rights commission
Clifford Chitupa MashiriDiaspora Vote
Clifford Chitupa MashiriClifford Mashiri
Zimbabwe Diaspora Vote sacrificed for business by Britain and the EU
May 29, 2020 39,284
May 29, 2020 26,321
May 29, 2020 60,973
May 29, 2020 25,917
May 29, 2020 16,441
May 29, 2020 25,170
May 29, 2020 69,334
May 28, 2020 61,243
May 29, 2020 55,384
May 19, 2020 206,301
May 7, 2020 96,281